Oduu Gammachiisaa injifannoo WBO! Zoonii lixaarraa! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOduu Gammachiisaa injifannoo WBO! Zoonii lixaarraa!
#Oduu_Gammachiisaa injifannoo WBO! Zoonii lixaarraa!
Kaleessa akkuma ibsame WBOn diina haleelee ture har’a
#Muddee_29_2019 Itti gaafatamaan koomaandi poostii zoonii Wallaggaa Arfanii kan ta’ee birgaadeer #jeneraal_Gabireetsaadiq_Gabiree_Mikaayeel kaleessaa WBO dhaan waraana isa eegan ( Ajjaabii /Guard ) nama saddeet ( 8 ) waliin Godina Qellem Wallaggaa aanaa #Gidaamii bakka addaa #Abootee jedhamutti rukutame sun guyyaa har’aa Hoospitaala Gidaamiitti lubbuun keessaa baatee jirti!injifannoon galuun baranuma! kan WBO jaallatu hundi share godhii diina garaa gubi.
Utubaa Lammii and Abdalla Ibraahim
ሰበር ዜና ሰበር
ብርጋደር ጀነራል ገ/ፃድቅ ገ/ምካኤል ፣የአራቱ ወለጋ ዞኖች ልምድ ፖስት አዛዢ በትላንትና እለት በኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት በደረሰበት ጥቃት ግዳም ሆስፒት በዛው እለት ሞተ።
Itti gaafatamaan koomandi postii godinoota Wallaggaa afranii, birgaadeer jeneraal Gabiretsaadiq Gabiremikaa’el waraana isa waliin jiranii fi isa eegan saddeet waliin guyyaa kaleessaa Gidaamii bakka Aboottee jedhamutti WBO dhaan rukutamee guyyaa har’aa hospitaala Gidaamiitti lubbun keessaa baateetti.
Kaleessas har’as ija Oromoo hedduutu Kol. Gamnachuu ilaala malee gurri Oromoo hedduun waan inni dubbatu dhaga’aa hin turres har’as hin jiru.K aleessas har’as waan Kol.Gammachuu Ayyaanaa dubbatu keessaa jecha sobadha jedhamu tokko arguun hin danda’amu, isa dhugaa inni dubbates dubbachaa jirus furmaata itti gochuuf kan wareegama baasaa jiru Oromoo muraasa. Nuti warra kaayyoo fi galma qabudha; warra abdii kutu miti” jedha kol. Gammachuu Ayyaanaa.
“ABOn addatti waa’ee Finfinnee waan jedhu hin qabu. Weerara Minilik dura lafti Oromoon irra jiraachaa turte biyya Oromiyaa jedhamtudha. Kaaba, kibba, baha fi lixaan daangaanshee kan beekamedha. Finfinneen ABOf akkuma magaalota Oromiyaa warra akka Asallaa, Adaamaa fi kaaniiti. Awwaalcha abboota keenyaa Finfinnee keessaa qotanii laga Qabbannaatti naqan. Qabbannaan fuudhee Awaashitti naqe. Awaash shonkoraafi Burtukaana gaarii biqilchee nuti lafee abboota keenyaa nyaanna. Araamuu taane. Waa’ee Finfinnee Oromoo malee kan nuuf murteessu
hin jiru. Oromoon gumaa hin nyaatu garuu har’a garuu safuu cabsinee akka gumaa abbootii keenyaa nyaachaa jirruu nutti himee jira Koloneel.
Mootummaan Dr Abiy Ahimed Qiletti qajeeluu irratti Namni qalbiin wanta paartii bilxiginnaan irraa uumame Yeroo hayyoonni dubbatan dhaggeeffataa ture Uumamuu Asxaa/mallattoo yookaan logo paartichaa bakka irraa fudhatame akeekun nama hin dhibu kana ammoo hayyoonni oromo yaada garagaraatin ibsu wal daawwachiisaa yaada keessan irratti kennadhaa galatoomaa https://youtu.be/X3M5m0DevqY
Namni akkam aangoo jaallata!!
Aangoo qabaatteef umrii dabalataa hin jiraattu. Keessattuu aangoo kee tiksachuuf jecha nama ajjeesuu fi ajjeesisuun hiikni isaa naaf hin galu. Erga Abiyyi Ahmed aangoo qabatee as yoo xinnaate Oromoon 2000 ajjeefameera. Oromoon 9000 ammoo hidhaa keessatti dararamaa jira. Haala akkasii buddeenni Abiyyi Ahmed nyaatee bulu sifaa’aafii laata? Jaalalli inni ijoollee isaatti agarsiisu kan bir’uu hin qabnee laata! Gaaffii namatti ta’a!
Osoo biyyoota guddataniitii kan fedhii isaatiin aangoo gadhiisuu qabu ture. Garuu itti ergaa ta’ee bulchitoonni Afrikaa hanga ajjeefamanitti (akka H/Sillaasee) ykn humnaan aagoorraa arii’amanitti ( akka Mangistuu ) ykn hanga qabamanii hidhamanitti (akka Omar Albashir) fedhii isaaniin aangoo hin gadhiisan. Abiyyi Ahmedis ykn ajjeefamee ykn qabamee hidhamee ykn biyyaa arii’amee malee waan aangootti cichee hafuuf qophaa’e fakkaata. Abbaa irrummaa isaa agarsiifachuuf uummata lafarraa duguugaa jira.